पशुपतिनाथमा पूजा गर्न भारतीय भट्टलाइ नै किन राखिन्छ ? यस्तो रहेछ कारण « Sajha Page
पशुपतिनाथमा पूजा गर्न भारतीय भट्टलाइ नै किन राखिन्छ ? यस्तो रहेछ कारण
नेपालका शासकलाई सूतक/जुठो पर्दा सारा नेपालीले पशुपतिनाथमा पूजा गर्न नमिल्ने भएकाले भारतबाट पुरोहित ल्याई पूजा गरेको भन्ने किंवदन्ती छ ।तीर्थयात्रा गएका बेला प्रताप मल्ल (कहीं यक्ष मल्लको पनि प्रसंग छ) ले भट्ट लिएर आएको इतिहासविद्ले उल्लेख गरेका छन् ।
पाशुपत शैव धर्मको तन्त्रशास्त्रीय पाण्डित्य परम्परा नेपालमा पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो र विकसित पनि । राजनीतिक सत्ताको आडमा भारतीय भट्टहरू बल बढाउन समर्थ भए । उनीहरूले शिवस्व हरणका लागि हर उपाय अवलम्बन गरे । यहाँ वैदिक शाखा र आगम बोधको अभाव रहेको कुतर्क गरे । अनुपलब्ध विषयलाई कसले उपलब्ध गराउने ? एउटा जालसाजीपूर्ण भ्रमको बीज रोप्ने, उमार्ने र फैल्याउने काम भइसकेको छ । राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रमबाट श्रीपशुपतिनाथमा चढाइएको गुठी बिर्ता जग्गा हेर्ने अख्तियारी पाएपछि मूलभट्टले दरबारलाई समेत धम्क्याएर बहुमूल्य रत्नजडित गहनाहरू गायब गरे । राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले प्रशासनिक दायरालाई अझ बढाइदिएपछि श्रीपशुपतिनाथको मूलभट्ट अधिकार सम्पन्न व्यक्तिका रूपमा स्थापित भयो । भारतीय दूतावासबाट परिचालित नेपाली मुटुमा बसेको यो समूहले यो देश र यहाँको समाजलाई कहिल्यै हित गर्ने छैन । (दाहालको पुस्तक ‘पशुपतिमा सात दिन’ को अंश) -कान्तिपुरदैनिकबाट